के भन्छिन् ग्राण्डी अस्पतालसंग १० करोड क्षतिपूर्ति माग्ने मृतक विष्टकी आमा? | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
के भन्छिन् ग्राण्डी अस्पतालसंग १० करोड क्षतिपूर्ति माग्ने मृतक विष्टकी आमा? के भन्छिन् ग्राण्डी अस्पतालसंग १० करोड क्षतिपूर्ति माग्ने मृतक विष्टकी आमा? 1648 views
मुटुमा समस्या भएको आशंकामा उनलाई आकस्मिक कक्षमा फिजिसियनहरुले जाँच पनि गरे । बिरामीलाई साँझ ७ बजे आइसियुमा सारियो । मुटुरोग विशेषज्ञबाट उपचार गराउन माग गरे पनि चिकित्सकले सुदिपलाई नहेरेको बिरामी पक्षको आरोप छ । तर परिवारलाई भेट्न दिँदासम्म सुदीपको मृत्यु भइसकेको मृतकको आफन्तको भनाई छ ।
मलद्धार वरपर घाउ आए वेवास्ता नगरौं, यो फिस्टुला पनि हुन सक्छ ? बच्न के गर्ने ? योनी किन चिलाउँछ ? वृद्धावस्थामा हुने बिर्सने रोग डिमेन्सिया भनेको के हो ? डा प्रदीप पाण्डे उच्च रक्तचापले मुटुमा कस्तो असर गर्छ ? बेहोस नै नगरी मेरुदण्डमा च्यापिएका नशाको शल्यक्रिया गरिन्छ Tweets by @hamrodoctor